Uyikhetha njani ikhompyuter yedesktop | Amadoda aQinisekileyo
Uyikhetha njani ikhompyuter yedesktop
Ukuba ufuna ukukhetha ikhompyuter yedesktop uyazi ukuba kwintengiso Kukho uluhlu olubanzi lweentlobo ngeentlobo zazo zonke izibonelelo onayo. Kodwa asikafikeleli kwixesha eliqhubele phambili njengokufumana ikhompyuter ephezulu ene-edition ephezulu kunokuba ungacebisa, kuya kufuneka uyazi ukuba ungayikhetha njani efanelekileyo kwimarike yangoku kunye neemfuno zakho.
Kuzo zonke inkqubela phambili esinayo kwimarike yethu, singayifumana ikhompyuter yobuchwephesha, iklasikhi okanye eyona iphambili, khetha eyona ilungele iimfuno zakho kwaye ujonge elona xabiso liphezulu lomgangatho, lelona lifanelekileyo kwipotifoliyo yakho.
1 Ungayikhetha njani ikhompyuter yedesktop?
2 Yintoni ekufuneka ndiyithathele ingqalelo ukuze ndithenge ikhompyuter?
3 Ithetha ntoni into nganye yekhompyuter?
3.1 Inkqubo okanye iprosesa
3.2 Inkumbulo ye-RAM
3.3 Ikhadi lemifanekiso
3.4 Imemori okanye idiski enzima
Ungayikhetha njani ikhompyuter yedesktop?
Ikhompyuter yedesktop Isixhobo esenzelwe ukuba sibekwe kwindawo enye esisigxina, Ayinakho ukuzimela okuthile kwezothutho njengelaptop, kodwa iya kubekwa ngendlela emileyo.
Olu hlobo lwekhompyuter lunenqaba, isikrini, ikhibhodi, imouse kunye nezinye izinto ezinje ngezithethi okanye umshicileli. Ezi modeli zibonelela ngesiqinisekiso xa kuthelekiswa neencwadana zokubhala apho ziqhuba ngcono kwaye zinamandla ngakumbi okuqhubekeka.
Xa ujonge ikhompyuter Kuya kufuneka ucinge ngononophelo malunga nendlela oza kuyisebenzisa ngayo ngelo xesha okanye nakwixa elizayo, Ingcebiso yakho yiyo eya kuthi ichonge uhlobo lwekhompyuter oya kuyidinga. Kukho indlela yokudibanisa ikhompyuter yakho kwaye uyenze ibe namandla kwaye ibe noqoqosho. Kule meko babizwa ngokuba ziikhompyuter zelebheli emhlophe. Kwaye kukho elinye ithuba lokuthenga ikhompyuter yohlobo kunye newaranti kunye nenkonzo yobuchwephesha enikezelwa nguloo mvelisi.
Yintoni ekufuneka ndiyithathele ingqalelo ukuze ndithenge ikhompyuter?
Ukuze ungabhaduli kude nento onokuyidinga, singakunika ulwazi oluncinci malunga nokuba inokuthetha ntoni namhlanje unekhompyuter ejikeleze i-300 Euro eneempawu ezisisiseko.
Inkqubo. Intel: Isizukulwane se-3 i4600 okanye iPentium G3. I-AMD: iRyzen XNUMX.
I-RAM. 8 GB yenkunzi yegusha. Ubuncinci obu bungakanani okoko uhlaziyo lwenkqubo yanamhlanje ludinga indawo.
Ukugcina. 1 Isifo sephepha HDD.
PSU okanye unikezelo lwamandla: 500 W.
Kodwa ukuba ufuna ntoni ikhompyuter yokudlala imidlalo enamandla njenge-Minecraft, i-CS Go okanye i-Fornite ixabiso liyenyuka (ukusuka malunga nama-700 ukubheka phambili) kwaye uyakufuna:
Inkqubo: Intel: 5th isizukulwane iXNUMX okanye ngaphezulu
I-RAM: I-16 GB yenkunzi yegusha kwifomathi ye-8 GB X 2.
Ukugcina: 1 Isifo sephepha HDD.
Ikhadi lemifanekiso: I-nVidia GTX 1650.
PSU okanye unikezelo lwamandla: Ngama-750 W.
Ngaphandle kwezi zigaba kukho iikhompyuter ezinobuchule ezibonelela ngeempawu ezininzi kubandakanya Ukucwangciswa koyilo lwegraphic, ukuhlelwa kwevidiyo, okanye ubugcisa bokwakha, kwaye apha amaxabiso aphuma efikelela kwi- € 1200 ukubheka phambili. Iimpawu zilingana nezo zedatha yangaphambili, siya kufuna kuphela iprosesa yesizukulwana sesihlanu, i-Intel: i7.
Ithetha ntoni into nganye yekhompyuter?
Into ebalulekileyo xa uthenga ikhompyuter kukujonga kwezi zinto zintathu ziphambili: iprosesa, ikhadi lemizobo kunye nememori.
Inkqubo okanye iprosesa
I-Intel Core iya kukunika ithuba lokubonelela nangaluphi na uluhlu kwezi kuxhomekeka kwiimpawu oza kuziqhuba kwikhompyuter yakho.
I-Intel Core i3: Ziiprosesa ezisebenza ngokusezantsi kunye namandla asezantsi. Zikulungele ukuzenzekelayo kweofisi okanye imisebenzi yokulungisa amagama, kunye nokukhangela ngokuthe cwaka kwi-intanethi.
I-Intel Core i5: Zisebenza ngokuphakathi kwaye zisetyenziselwa ukuqhuba iinkqubo ezilula zokuhlela imifanekiso ye-3D okanye imidlalo.
I-Intel Core i7: Ziziphelo eziphezulu ezenzelwe iinkqubo zokuhlela ezinamandla ngakumbi kwaye zikwazi ukuqhuba usetyenziso oluninzi ngokukhawuleza.
Intel Core i9 okanye i-Intel Xenon: Yenzelwe ukuziqhelanisa nemisebenzi yobungcali.
Yinkumbulo yethutyana engenakulawulwa ngumsebenzisi, njengoko iya kuba ngumsebenzi wokuqhubekeka lonke ulwazi olugcinwe kwikhompyuter. Olu hlobo lolwazi olugciniweyo luya kuba yidatha efunekayo kwinkqubo yakho eya kubakho Unoxanduva lokwenza imisebenzi eyahlukeneyo kwikhompyuter yakho xa uyifuna. Ininzi yokwenza nezicelo, i-RAM ephezulu, kungcono ukuba uya kulawula ezi zicelo kuba zifuna indawo yokugcina indawo.
Sinayo ukusukela ngoko I-4 GB ukuya kwi-6 GB ye-RAM yemisebenzi elula kakhulu, ye 8 GB ye RAM Umsebenzisi ophakathi kunye nokulinganayo 16 GB ye RAM, yenzelwe umsebenzisi obalaseleyo.
Ngaba ngulowo ikuvumela ukuba ujonge imifanekiso kunye nevidiyo ngokufanelekileyo. Zimbini iintlobo zomenzi I-NVIDIA kunye ne-AMD. Ezona zibiza kakhulu kwaye zaziwa kakhulu kuba zinomgangatho kunye namandla angcono yiNVDIA. Ukuba ufuna ukwazi ngakumbi ngamakhadi emizobo unokujonga eli khonkco.
Imemori okanye idiski enzima
Iya kuba noxanduva lokugcina lonke ulwazi oluqhubayo kwaye ufuna ukulugcina okwesibini kwikhompyuter yakho. Ukuphakama komthamo, kokukhona inkcitho iphakama. Zimbini iintlobo zeenkumbulo: Ii-SSD eziqhuba nzima kwaye bayaziboleka ekubeni namandla angaphantsi, kodwa bayakhawuleza kwaye babize kakhulu (malunga ne-256 GB); kunye nee-HDD: ngomthamo ophezulu kodwa ucothe kwinkqubo, zikwabiza kakhulu kunangaphambili.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » yokuPhila » Te knoloji » Uyikhetha njani ikhompyuter yedesktop